ပြည်သူက လက်မခံ သော် OIC ရုံးဖွင့်မည် | Freedom News Group
ပြည်သူက လက်မခံ သော် OIC ရုံးဖွင့်မည်
by FNG on October 10, 2012	OIC အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ၏ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ရုံးခန်း ကို ရခိုင်ပြည်
နယ် စစ်တွေ မြို့နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း နှင့် ပြည်ပ ဆိုက်ရောက် မှု ဆိုင်ရာ ရုံးခန်းများ ကို ရန်ကုန် မြို့တွင်
မကြာခင် ဖွင့် မည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။
OIC ရုံးခန်း ဖွင့် လှစ်ခြင်း ကို ပြည်သူ က သဘောမတူ သော် လည်း အစိုးရ နှင့် သဘော တူညီချက်
အရ ဖွင့်လှစ် မည် ဖြစ်ကြောင်း OIC မှ ပြောရေး ဆို ခွင့် ရှိသူ တစ်ဦး က BBC သတင်း ဌာန ကို ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့တွင် OIC ရုံး ဖွင့် လှစ် ရန် ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြမှု များ နေ့ စဉ် ပြု လုပ် လာခဲ့
ရာ ယနေ့လူ ပေါင်း ထောင် ချီ ပါဝင် ပြီး ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ် ကောင်စစ်ဝန် ရုံး ရှေ့ တွင် လည်း ဆန္ဒပြ ခဲ့
ကြသည်။ မြန်မာ အစိုးရ ၏ သဘောတူညီချက် အရ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံ ရီယာဒ် မြို့အခြေစိုက် OIC ရုံး
သည် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် လာရောက် ဖွင့် လှစ် ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်း အဖွဲ့သည် ဘင်္ဂါ လီ မွတ် ဆလင် များ သာမ က ဗုဒ္ဓဘာသာ များ ကို လည်း ကူညီ မည် ဟု ဆိုသည်။ About these ads
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ ဖျက်ဆီးမှု ကို ကောဇ့်ဘဇား သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော တရုတ်ပြည် တွင် ကွယ်လွန် →
ဟေ.ကောင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတွေမှာလည်း လည်းချောင်းသွေကိုဖေါက်လူ တဲ.ကိုယ်ချင်စာတရားမရှိတဲ.အလူကိုယ်ပေးလူတာလည်းမင်းတို.ကောင်တွေရဲ.အစ္စလမ်ပဲလေ
ဟေ.ကောင် မျိုးဖေါက်သာသနာပြု လူအချင်းချင်းဝါးမျိုးပြီးသာသနာပြုတာလည်းမင်းတို.ဘာသာရေးပဲလေ
ဟေ.ကောင် ဘာမှန်းမသိအသံနားထောင်ကောင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးရောင်ဝါးဝါး “ နာမ” ဖတ် တာလည်းမင်းတို.ဘာသာရေးပဲလေ
ဟေ.ကောင်လေ.လာချင်ရင်မင်းတို.ဘာသာကနေဗုဒ္ဒဘာသာပြောင်းသွားတဲ.ဆရာဆန်းလွင်ရဲ. ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြာင်းကိုယ်ဖတ်ကြည်.ဟေ.
ဒီလိုမျိုးဘာသာဝင်တွေမျာတဲ. OICကို တို.နိုင်ငံမှာချေချခွင်.မပြုတာဟေ..
November 2, 2012	ခြင်္သေ.	#
မွတ်ဆလင်တွေ အထူးသဖြင်.FRC တွေကိုယ်လည်းနေထိုင်ခွင်.ပေးထားခဲ.ပြီးပြီ
November 1, 2012	ထက်ကိုး	#
get out OIC
October 13, 2012	လဂွန်းအိန်	#
မှန်ပါတယ်.. လုံးဝကိုလက်မခံသင့်ပါဘူး… ကုလာတွေရဲ့အကျင့်ကိုအားလုံးလဲသိမှာပါ… တဖြည်းဖြည်းဝါးမြိုခံရပါလိမ့်မယ်… အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဆန့်ကျင် ကြပါစို့….
October 12, 2012	Bo Gyi	#
လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်..အိုအိုင်စီ ဟာ အကြမ်းဖက်အားပေးတဲ့ အဖြစ်တခုပါ.. အပေါ်ယံကတော့ လူသားချင်းစာနာခြင်းခေါင်းဆောင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးပါ.. http://english.alarabiya.net/articles/2012/08/16/232504.html ကိုသာ ဖတ်ကြည့်ပါ.. တကယ် ကိုယ် ကုလားအချင်းချင်းတောင် ရန်တိုက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ ၊ တခြားဘာသာတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ကတော့ လွယ်လွယ်လေးလုပ်မဲ့ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးနော်…. Syrian state media on Thursday slammedadecision by the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to suspend the country’s membership, saying the body served “Western colonialism” and its members supported “terrorists.”
Earlier Thursday, at the end of an emergency meeting in Mecca, the OIC announced it had suspended Syria’s membership of the 57-nation body, and expressed “deep concern at the massacres and inhuman acts suffered by the Syrian people.”
State-run Syrian newspaper Tishrin accused the OIC of beinga“cunning devil,” saying the organization’s suspension of Syria was unsurprising, given its “sectarian doctrine, which is at odds with the essence of true Islam.”
The OIC suspended Syria’s membership citing President Bashar al-Assad’s violent suppression of the Syrian revolt.
October 11, 2012	nay moe	#
အပြင်း အထန် ကန်. ကွက် ပါ သည်။ လက် ရှိ အရေး သည် တမျိုး သာုးလံးအရေး ဖြစ် သည်။ ကု လား များ မြန် မာ ပြည် မှာ ခြေကုတ် ယူ လာ မည် ကို တမျိုး သား လုံး ဆန်. ကန်. ရ မည်။ အစိုး က ဘာ ကြောင်. သဘော တူရ ပါ သလဲ။ ရခိုင် အရေး သည် OIC မလို ဘဲ ဖြေ ရျင်း ရေ ပ မည်။ OIC ရုံး ထိုင် ချင် လျှင် ဘင်္ဂလား မှာ ထိုင်စေ ပေါ.။ လက် ရှိ ကန်. ကွက် ရုံနှင်. မရ လျှင် လက် နက် နျင်. ဖြေ ရှင်း ရ သော အကြမ်း ဖက်အခြေအနေ ဇြစ် လာေ ပ မည်။ ရုံး လာ ထိုင် လျှင် လက် နက် ကိုင် တိုက် ထုတ် ရပေ မည်။
October 11, 2012	-	#
သမ္မတကြီး ဟာအသိညံ ရှိ/မရှိ စောင့်ကြည့်မည်
October 11, 2012	K-M-Chin	#
လက်မခံရင်လည်းကြိုးသာဆွဲလိုက်ကြ……OICဆိုတာဘာတွေလုပ်သလဲ၊ ဘာတွေမလုပ်သလဲဆိုတာသေချာမသိပဲမွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာနဲ့ မျက်စိမှိတ်ရမ်းသမ်းပြီးသူများယောင်သလိုလိုက်ယောင်နေတာလူပြိန်းဆန် လွန်းပါတယ်။လက်မခံချင်သူတွေ၊လက်မခံနိုင်သူတွေကဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်
စဉ်းစားပါ။လူမှု့ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့OICကိုလက်မခံချင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဟာ အစွန်းရောက်တွေသာဖြစ်ကြမှာပါ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြပေါ့။ကိုယ်ကအ စွန်းရောက်နေသလားလို့..ဒါပါပဲ။ သတင်းလေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် FNG။
October 11, 2012	Thet Naing	#
ဗုဒ္ဓဘာသာများကိုကူညီဖို့ OIC မလိုပါဘူး
October 10, 2012	jack	#
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,567,273 hits